Miparitaka etsy sy eroa ny zava-mahadomelona | Région Boeny
Rongony milanja 17 kilao, ary paraky gasy milanja 74 kilao no saron’ny mpitandro filaminana avy eo anivon’ny zandarmariam-pirenena ao amin’ny kaomina Manerinerina, distrikan’Ambatoboeny ny harivan’ny alatsinainy faha 19 desambra lasa teo.
Taorian’ny « opération MAZAVA » dia nanatanteraka fanakanana ireo fiara rehetra mandalo ao Manerinerina ireo zandary any an-toerana hitandroana ny fandriam-pahalemana amin’izao ankatoky ny fetin’ny Krisimasy sy ny faran’ny tona izao.
Fiarakodia roa samy hafa araka izany no nahatrarana ireto zava-mahadomelona ireto. Ny voalohany dia fiara iray avy any Ambalafamito Antsohihy izay nikasa ny ho aty Mahajanga no tra-tehaka nitondra ilay rongony ka tovolahy iray tokony ho eo amin’ny 22 taona eo ho eo no tompon’antoka tamin’ny fitondrana izany. Taxi-brousse iray indray kosa avy any Bemilolo Port-Bergé izay nikasa hamonjy an’Andriba no nahatrarana ireo Paraky gasy ka lehilahy 64 tona no voatondro ho tompon’ny entana.
Ho tanterahina vay hatrany ny fanadihadiana an’ilay zatovo lahy ka hatolotra ny fitsarana tsy ho ela ny raharaha. Ny tompon’ilay paraky gasy indray dia terena handoa ny lamandy manandrify amin’ireo paraky gasy noentiny. Ho dorana miaraka amin’ireo mpitondra fanjakana ao Manerinerina ny rongony, ireo paraky gasy kosa dia nogiazan’ny zandary ary hatolotra ny ao amin’ny OFMATA na Office Malgache duTabac. Ireo fiara roa indray dia samy hampidirina fourrière avokoa noho izy ireo nitondra entana tsy ara-dalàna.
Manoloana izao toe-javatra mampalahelo izao dia mampahatsiahy ny tompon’andraikitra ny Kap Razanaparany Félix, komandin’ny kaompanian’Ambatoboeny fa fanetry be ho an’ny firenena ireto karazan-java-mahadomelona ireto. Asaina araka izany hoy izy ny vahoaka manontolo, indrindra ny mpamily mba hifanolo-tànana amin’ireo mpitandro filaminana ka hanome loharanom-baovaovao sy hisava ny entan’ireo mpandeha mba hisorohana ny fiparitahan’ireo zava-mahadomelona ireo. Indrindra fa ny rongony izay mahery vaika tokoa. Notsipihany fa ny fifohana iray fonosana kely monja amin’izy io dia efa mampivadika adala ny mpidoroka azy ka hahavitany loza mahatsiravina, toy ny famonoana olona tsy amim-pihambahambana ohatra.